20 Aaladaha Naqshadeynta Shabakadda ee Bilaashka ah laga bilaabo Dayrta 2020 | BehMaster
Bogga ugu weyn/web Design/Qalabka Naqshadaynta Webka bilaashka ah ee 20 laga soo bilaabo Xilliga 2020
Ilaha bilaashka ah ee bulshada naqshadeynta waxay ku kordhin kartaa qiimaha goobta ecommerce. Halkan waxaa ah liiska aaladaha shabakada cusub iyo walxaha naqshadaynta laga soo bilaabo dayrta 2020. Waxaa jira nashqadeeyaha iyo barnaamijyada horumariya, agab codaynta, agabka garaafyada, xarfaha, iyo in ka badan. Dhammaan qalabkani waa bilaash, in kasta oo qaarkood ay sidoo kale bixiyaan noocyo qaali ah.
Qalabka Naqshadaha Leh
Serenade waa app si aad u qorto koodka adoo isticmaalaya hadalka dabiiciga ah. Waxay la midaysaa qalabyada jira (tusaale, Visual Studio Code, Atom, iyo Chrome), markaa looma baahna in laga tago habayntaada hadda. Adeegso amarrada codka adigoo dhinac teebaya, ama gabi ahaanba ka tag kiiboodhkaga gadaasha.
Quarkly waa qalab lagu abuurayo mareegaha iyo apps webka. Isticmaal baloogyada la-qabsiga ee horay loo sameeyay si aad si dhakhso leh u dhisto goobo is-dhexgal ah. Codso animations, filtarrada, isku darka, isbeddelada, iyo in ka badan. Ku codee qaybahaaga falcelinta diyaarsan. La shaqee mashruuc asxaabtaada. Bilaash inta lagu jiro beta
Unspam.email waa aalad tijaabiyaha iimaylka onlayn ah. Waxay falanqaysaa iimaylka, waxay ku meelaysaa dhibco spam ah, waxayna ku saadaalisaa natiijooyinka gaarsiinta khariidad kulaylka. Baro inaad hagaajiso gudbinta warsidaha iimaylka. Hubi in qof walba uu akhriyi karo iimayladaada hubinta gelitaanka
Dallada WP wuxuu la socdaa boggaga WordPress wuxuuna ku ogeysiinayaa haddii ay wax qaldamaan, laga bilaabo khaladaadka PHP ilaa wakhtiga iyo waxqabadka. Kahortagga wakhtiga dhimista, dar-dargeli hawlahaaga dayactirka, oo fududee qulqulka geynta degelkaaga.
Dhaliyaha Midabka & Hadhka waxay soo saartaa midabyo (caddaan saafi ah oo lagu daray) iyo hadh (madow saafi ah oo lagu daray) midabka hex ee la siiyay 10-boqolkiiba. Waxa kale oo ay dib u eegis ku samaynaysaa midabada iyo hadhyada midabka salka.
Phosphor waa maktabad summada il furan oo bilaash ah oo loogu talagalay is-dhexgalka, jaantusyada, bandhigyada, iyo in ka badan. Waxay haysataa in ka badan 4,000 oo astaamood, oo iswaafaqsan qaabka iyo cabbirka laakiin dabacsanaan xagga cabbirka iyo miisaanka.
goobooyinka waa kordhinta Chrome ka oo isku daraysa muuqaal, maqal, iyo wada shaqayn ku salaysan fariinta si ay ugu ogolaato isticmaalayaasha inay qabsadaan, faallo ka bixiyaan, oo ay wadaagaan wax kasta oo ay ku arkaan shaashadooda. Wada hadal kula yesho macnaha guud ee waxa aad eegayso. Tirtir fariimaha hore iyo gadaal iyo isfaham la'aanta.
Gazepass waxay u ogolaataa isticmaalayaashaada inay soo galaan iyagoo isticmaalaya biometrics dhamaan qalabkooda, halkii ay ka ahaan lahaayeen furaha sirta ah. Iyada oo dhawr sadar oo kood ah, isticmaalayaashu way is-diiwaangelin karaan oo geli karaan iyagoo isticmaalaya dareemayaasha biometric ee asalka ah ama aqoonsiga weji iyada oo loo marayo kamarad webka.
Link hover animation waxay siisaa koodka muujinta firfircoon ee fudud.
Barar waa madal ecommerce ah oo aan madax lahayn. Abuur khibrado wax iibsiga oo degdeg ah oo dabacsan adoon ka fikirin kaabayaasha ama dayactirka. Waxaa ku jira is-diiwaangelinta asalka ah, moodooyinka nuxurka gaarka ah, astaamaha jumlada B2B, iyo hubinta API.
IconPark waxa uu siinayaa in ka badan 1,400 astaamood oo tayo leh iyo is dhexgal lagu habeynayo Halkii laga isticmaali lahaa faylal kala duwan oo SVG ah, sifooyinka hal SVG ayaa la bedelay si loo soo saaro mawduucyo kala duwan.
BGJar waa dhaliyaha asalka SVG ee bilaashka ah ee mareegahaaga, blogyada, iyo abkaaga. Ka dooro 24 nooc oo gadaal ah ka dibna habbee.
Hitcount waa website fudud oo casri ah hit counter. Nuqul ka samee koodka oo dhig goobtaada meesha aad rabto in miiska lagu soo bandhigo.
Madoow madow waa kormeeraha gaarka ah ee mareegta-waqtiga dhabta ah. Geli ciwaanka degel kasta, Blacklight-na wuu iska baari doonaa oo daaha ka qaadi doonaa tignoolajiyada daba-galka isticmaalaha.
Fikradaha bilaashka ah
Autobus Omnibus waa casri, geesinimo sans serif ah oo qurux badan oo muhiim ah.
Mango waa xarfo joomatari oo bilaash ah oo ugu yar. Waa cusub iyo mustaqbalka- faa'iido u leh calaamadaha, cinwaannada, iyo dhaqdhaqaaqa garaafyada.
Laredo Rounded waa xarfo qaabaysan oo bilaash ah oo wareegsan oo uu sameeyay Studio Aurora.
Skaters waa xarfo muuqaal fudud oo qallafsan si ay naqshadahaaga caadiga ah u soo baxaan.
Maskaxda wanaagsan waa far qurux badan oo xarrago leh si aad u shakhsiyayso naqshadaada.
Fiidiyowga: Alan Rabinowitz oo ku yaal xiriiriyeyaasha nofollow iyo xiriiriyeyaasha xiriirka la leh
5 Waa in uu leeyahay Aaladaha Hubinta Naxwaha marka la Abuuraayo Waxyaabo Ka Xor ah Khalad
Jaantusyada: Tirakoobka Amniga Cyberka iyo Isbeddellada